Barcelona iyo PSG oo shir jaraa’id caawa qabanaya…(Sheekadee la soo afjari rabaa?) – Gool FM
Barcelona iyo PSG oo shir jaraa’id caawa qabanaya…(Sheekadee la soo afjari rabaa?)
Byare July 25, 2017
(Europe) 25 Luulyo 2017. Qofkasta ayaa qiyaasi kara waxa maankaaga ku soo dhacaya marka aad maqasho Barcelona iyo PSG ayaa caawa shir jaraa’id ku dhawaaqay xilli Neymar aad lala xiriirinayo kooxda reer France halka Verratti isna si wayn lala xiriirinayo kooxda reer Spain.
Waxaa la fahasan yahay in PSG ay diyaar la tahay inay bixiso lacagaha lagu bur burin karo qandaraaska xiddiga reer Brazil ee dhan 196 milyan oo bound iyadoo xitaa ay AS shaacisay in laacibka loo qoray heshiiska.
Kooxda reer France ayaa shaacisay shir jaraa’id oo ay caawa qaban doonto marka ay saacada dalkaasi sheegeyso 11pm, Barcelona ayaa iyana saacad iyo bar kaddib qaban doonta shir jaraa’id.
Baraha Bulshada gaar ahaan Twitterka ayaa durba qarxay iyadoo la is waydiinayo su’aalo sida Neymar miyaa lacago rikoodh ah ugu biiri doona PSG mise Barcelona ayaa la soo saxiixan rabta Marco Verratti.
Haddaba aqrista sidee adigu kula tahay, ma sheekada Neymar ayaa la soo afjari rabaa mise mida Verratti mise shirka jaraa’id maba ku saabsana sheekadaan mala awaaleyno oo waxaa looga hadli doonaa howlahoodii caadiga ahaa.
Inter Milan oo €15m oo euro ku baadi goobaysa Erik Lamela
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Chelsea vs Bayern Munich 2-3 (Morata oo kasoo muuqday guuldarradii Munich)